ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ Teachers, Educators, and Team.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပရိသတ်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ကာ ဘာသာစကား ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို ပြောဆိုကြပြီး အလွှာပေါင်းစုံမှ ကြိုဆိုကြသည်။ အလုပ်မလုပ်သည့်အခါ Woodlanders သည် စက်ဘီးစီးခြင်းမှ ပျားထိန်းခြင်းအထိ၊ frisbee မှ foxtrot အထိ စိတ်ဝင်စားမှုကို လိုက်စားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ Leadership Team
Woodlands ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ
ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Hamish Rotstein နှင့် Woodlands ၏ပူးတွဲပိုင်ရှင်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် Early Learning ကိုစိတ်အားထက်သန်ပါသည်။ ပညာရေးအတွက် ကျွန်ုပ်၏ စိတ်အားထက်သန်မှုသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူမှ မွေးစအထိ ပညာရေးအဆင့်အားလုံးတွင် (၄၆) နှစ်ကြာ ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ Prep-12 ကျောင်းများစွာ၏ ကျောင်းအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဆင့်တိုင်းတွင် ပညာရေးကို လေးလေးနက်နက် နားလည်သဘောပေါက်ပြီး - ကလေးများသည် ၎င်းတို့၏ ပညာရေးတွင် မည်သည့်နေရာမှ သင်ယူကြမည်ကို နားလည်ပါသည်။
ပညာရေးတွင် ကျွန်ုပ်၏ အကြွင်းမဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုမှာ အသက်0မှ6နှစ်အထိ ကလေးများအတွက် ထူးချွန်ထက်မြက်သော ပညာရေးအတွေ့အကြုံများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပညာရေးကို ဘဝခရီးတစ်ခုသာမက ဘဝအတွက် ပြင်ဆင်မှုအဖြစ် ကျွန်တော်မြင်သည်။ Woodlands အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်မှာ "ထိုင်ရန် မမျှော်လင့်ထားသော အရိပ်အောက်တွင် သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးရန်" ဖြစ်သည်။ ဒီပညာရေးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သားသမီးတွေကနေတစ်ဆင့် အနာဂတ်မှာ ဖြစ်ထွန်းလာမယ်ဆိုတာကို ကလေးတွေနဲ့အတူ ပညာရေးကို “သစ်ပင်စိုက်” ဖို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တွင် ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပညာရေးကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အစောပိုင်းကလေးသူငယ်ပညာပေးဆရာများကို လမ်းညွှန်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ဦးဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ စင်တာများအားလုံးနှင့် ချဉ်းကပ်မှုရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဂေဟာများအားလုံးတွင် သူငယ်တန်းအစီအစဉ်ကို တည်ထောင်ထားပြီး ကျောင်းသို့သွား၍ ဘဝအတွက် ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ထားသောကြောင့် Kinders များအတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
Hamish သည် Woodlands Long Day Care & Kindergarten ၏ ဒါရိုက်တာနှင့် ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။
Hamish သည် 2000 ခုနှစ်တွင် သူတည်ထောင်ခဲ့သော Melbourne အခြေစိုက် ဥပဒေကုမ္ပဏီ Rotstein Commercial Lawyers ၏ တည်ထောင်သူနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်သည်။ သူသည် ဥပဒေဘွဲ့၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှု Hamish နှင့် သြစတြေးလျ၏ အအောင်မြင်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့အတွက် ခိုင်မာသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ . ၎င်းသည် အစောပိုင်းအဆင့် စတင်သည့်လုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များအထိ အဆိုပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြား၏ ကြီးထွားမှုတွင် ရှေ့နေ၊ အကြံပေးနှင့် ဗျူဟာမှူးအဖြစ် ပထမဆုံးပါဝင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်၊ သူသည် သြစတြေးလျ၏ အကြီးဆုံး လက်လီဆေးဆိုင် ကွင်းဆက်ဖြစ်လာစေရန် ကူညီပေးခဲ့သည့် ၎င်း၏မိသားစုမှ စတင်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သော Chemist Warehouse Retail Group နှင့် နီးကပ်စွာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ သူသည် ၎င်းတို့၏ရှေ့နေနှင့် အကြံပေးအဖြစ် အဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ နှစ် 20 ကျော်ပြီဖြစ်သည်။
Hamish သည် ကလေးများ စိတ်ဒဏ်ရာကို တောင့်တင်းစေရန် ကူညီပေးသည့် အနုပညာနှင့် အနုပညာကုထုံးကို အသုံးပြုသည့် Creative Art Therapies Australia (ယခင် Art Cabriolet) အပါအဝင် အခြားကလေးများ၏ အလှူအတန်းများစွာကို ထူထောင်ပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါ RCH 1000 သည် ကလေးအထူးကုဆေးပညာဆိုင်ရာ သုတေသနပြုရန် တစ်နှစ်လျှင် $1M ကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးစားနေသည်။ ဝိတိုရိယရှိတော်ဝင်ကလေးဆေးရုံ။ 2016 ခုနှစ်မှစတင်၍ ဗစ်တိုးရီးယား၏တစ်ခုတည်းသောကလေးအထူးကုကုသရေးဆေးရုံဖြစ်သည့် Very Special Kids Foundation ၏ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
Hamish ၏ အစောပိုင်း သင်ကြားရေး ပညာရေးကို ဝါသနာပါပြီး ၄၅ နှစ်ကျော် အစောပိုင်း သင်ကြားရေးဆရာ ကိုယ်တိုင်က သူ့အမေက ပျိုးထောင်ပေးခဲ့သည်။ Hamish သည် ကလေးများ၏ သုခနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို လေးနက်စွာနှင့် အပြုသဘောဆောင်သော အစောပိုင်းသင်ယူမှု အရည်အသွေးကို မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်သည်ကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ သူသည် မယိမ်းယိုင်သောယုံကြည်ချက်နှင့် ပထမတန်းစားသင်ကြားမှုဆိုင်ရာ ပထမတန်းစားပညာရေးနှင့် ၎င်းတို့၏စောင့်ရှောက်မှုရှိ ကလေးများအားလုံးအတွက် ဂရုစိုက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ Woodlands Early Learning with Fay Woodland ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
သစ်တောများ Vision, Mission, and Values.